Nhau - 5 Zvikonzero nei Exercise Inoita Kuti Ufare
Wakaneta nekunzwa pasi mumatope? Fambisa! Wakamanikidzwa nezve basa? Fambisa! Wakaneta nekunzwa kushaya simba mukati mezuva rako rese? Simudza! Kuneta kukwira masitepisi? Tungamira kumakomo! Zvinoshamisa kuti kurovedza muviri kunogona kuitirei hupenyu hwako hwese. Izvo hazvisi zvekungopinda mune iri nani mamiriro. Zviri zvekuita kuti hupenyu hufadze! Kana zviri nyore kufamba, zviri nyore kuita zvese zvaunoda kuita! Tarisa uone runyorwa pazasi kuti uone kana chimwe chinhu chichienderana newe.
1. Zvirinani Mamiriro Ezvinhu
Mukati memaminitsi mashanu ekurovedza muviri, iwe unogona kunzwa uchifara! Ukangotanga kufamba, uropi hwako hunoburitsa serotonin, dopamine uye norepinephrine pamwe nevamwewo. Izvi zvinoita kuti unzwe zvakanaka! Nekudaro, kunyangwe kana iwe usinga nzwe kuda kuita chero chinhu, kungo famba famba kunogona kukuita iwe kufara!
2. Kuderedza Kushungurudzika
Sekureva kweimwe ongororo yepamhepo, zvikamu gumi nezvina chete zvevanhu vanoshandisa kurovedza muviri kugara vachishushikana nepfungwa. Sezvambotaurwa, zvinongotora maminetsi mashanu kuti utange kunzwa zvirinani uye haifanire kuve wakanyanya kurovedza muviri. Muchokwadi, kudzika- kusvika pakati nepakati-kurovedza muviri kuri nani pane kukwirira-kwekudzikisira kwekushushikana kwekushushikana. Ini munguva pfupi yapfuura ndakaverenga chinyorwa muRunner's World nezve maitiro ekurovedza muviri anokanganisa sei post traumatic stress disorder. Kufamba, kumhanya uye iyo yoga inowanzo kuve sarudzo dzinodiwa.
3. Kuwedzera Kwepfungwa Kusimba
Padivi rakaomarara remari, kana iwe uchirovedza muviri nenzira inosundira iwe panyama, unosimba mupfungwa. Paunenge wakaomarara mupfungwa, unogona kubata zvakanyanya kushushikana. Kune vamwe vanhu, kunzwa kwekukudziridza kugadzikana kwepfungwa kunodhakwa. Iwe unosvika pachinangwa chako uye wotanga kushamisika kuti chii chimwe chaungaite! Vanhu vanodzidzira kuzvitora kuenda kumberi mumitambo senge kumhanya, zvombo, kuchovha, etc. Kuomarara kwepfungwa kunobatsira mune zvimwe zvehupenyu hwako. Iwe unogona kubata zvimwe zve chero chinhu.
4. Hupenyu Hunoita Kuti Nyore
Kana iwe ukakwanisa kupfuura nezuva rako nenzira iri nyore, hazvingave zvakanaka here? Kana kutakura grocery nevana, kana kufambisa zvinhu pamba zvaive nyore, haungave wakanyanya kufara here? Kuita maekisesaizi kunogona kukuitira iwe! Wedzera simba, kunatsiridza hutano hwako hwemwoyo uye hupenyu hunongonzwa kuve nyore! Ngatiregei kumbotaura nezve foshoro yechando.
5. Yakavandudzwa Immune System
Pane zvakawanda zvekufungidzira nezvekuti kurovedza muviri kunovandudza sei hutachiona hwako. Kuita maekisesaizi kunogona kubatsira nekuburitsa mabhakitiriya kubva mumapapu uye zvakare kunogona kudzima carcinogen nekuwedzera chiitiko cheyymphatic system, iyo inodurura tsvina kubva mumuviri wako.
Kana ropa rako richipomba, iwe uri kuwedzerawo mwero urwo maantibhakitiriya nemasero machena eropa anomhanya nemuviri. Vanoona nekurwisa chirwere. Sei usingade zvimwe zveizvo zvichiitika mukati mako?
Paunenge uchirovedza muviri, kusunungurwa kwemahormone ane chekuita nekushushikana kunononoka. Kushungurudzika hakusi kwekungonzwa - kune muviri chaiwo. Nekuderedza iwo mahormone, iwe unatsiridza hutano hwako.
Panogona kuve nezvakawandisa zvechinhu chakanaka hazvo. Kurovedza kwakapfava kusvika pakati nepakati kunovandudza immune system yako Kurema, kurovedza muviri kwakanyanya kunodzora hutachiona uye kunowedzera mahormone ekudzvinyirira. Kana iwe uri kurwisa kutonhora, kuita zvishoma kurovedza muviri senge kufamba kana jog kwenguva pfupi yenguva ingori zano rakanaka. Kana iwe urikudzidzira marathon uye uchangopedza kumhanya kwenguva refu kana chinhanho chebasa rekumhanyisa saka unofanirwa kungwarira kuti usatandara nevanhu vanorwara kwemaawa akati wandei mumashure. Shandisa iyo nguva kuti uzvipe iwe yakakodzera post-Workout kudya uye kuzorora.
Zvinowanikwa Zvigadzirwa, Sitemap, AMP Mobile Floor Furo Rakajeka, Floor Rakajeka, Floor Puzzle Mat Cushion, Yepasi Yekunze Exercise Mat, Floor Mat Puzzle, Floor Furo Rakajeka Mat, Zvese Zvigadzirwa